कटरीनाको अभिनयबाट सन्तुष्ट भएनन् आमिर, उठाए यस्तो कदम – Nepal Journal
कटरीनाको अभिनयबाट सन्तुष्ट भएनन् आमिर, उठाए यस्तो कदम
Posted By: Nepal Journal March 12, 2018 | २८ फाल्गुन २०७४, सोमबार १६:४८
बलीउडका सुपरस्टार आमिर खान हालमा दिनमा आफ्नो फिल्म ‘ठग्स अफ हिन्दुस्तान’ को सुटिङमा व्यस्त रहेका छन् । यस फिल्ममा कटरीना कैफ योद्धा राजकुमारीको भुमिकामा रहेकी छिन् । र हालैमा उनले आमिर खान र फातिमाका साथ एउटा गीतको सुटिड. सकेकी थिईन् । तर आमिर खान भने उनको अभिनयबाट खुसी नभएको बताइएको छ ।
भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार यसको सुट पछि आमिर खानले जब केही सीनहरु हेरे तब उनलाई लाग्यो कि कटरीको केही सीन ठीक छैनन । उनको अभिनय देखेर आमिरले ती केही सीनहरु फेरी सुट गर्ने निर्णय लिएका छन् । आमिरले कटरीनालाई त्यहीँ सीन फेरी सुट गर्नका लागि भनेका छन् ।
यस्तोमा कटरीनाको केही सीन फेरी सुट गर्ने आशा गरिएको छ । विजय कृष्ण आचार्यको निर्देशनमा बनेको फिल्मको अअन्तिम सुटिड. भारतको राजस्थानमा भइरहेको छ ।
Be the first to comment on "कटरीनाको अभिनयबाट सन्तुष्ट भएनन् आमिर, उठाए यस्तो कदम"